Search ကာမလိုးကား - GenFK.com
23 Jan 2018 · 24K views
ထပ်​တင်​​ပေးပါဦးမယ်​ Y.B.S နဲ့ ခရီးသွားလာ​နေကြတဲ့ ပြည်​သူများ ကား​ပေါ်​ရောက်​ရင်​ မိမိတုိ့ရဲ့ အဖိုးတန်​ပစ္စည်းများ ထည့်​ထားတဲ့ လွယ်​အိတ်​ စလင်းဘက်​အိတ်​များကို ​ရှေ့သို့ သိမ်းပြီး လွယ်​ပါ ကိုင်​ထားပါ ​တွေးချင်​ရာ​တွေး ​ငေးချင်​ရာ ​ငေးမ​နေကြပါနဲ့ ဒီကား​ပေါ်မှာ နှိုက်​သွားတဲ့ ခါးပိုက်​နှိုက်​ ​တွေဟာ ကျွန်​​တော်​ပထမ​နေ့တင်​ထားတဲ့ ​ဆေး​ကျောင်းသူ​လေးကို နှိုက်​သွားတဲ့ ခါးပိုက်​နှိုက်​ ​တွေပါပဲ ဒီတစ်​​ခေါက်​ သူတို့ရဲ့ သား​ကောင်​ဖြစ်​သွားသူက ​တော့ ဗိုလ်​ကြီးမိန်းမ ပါ အပြာ​ရောင်​ ဂျက်​ကက်​ ဆံပင်​ bob cut နဲ့ ညီမငယ်​ပါ အင်္ကျီငါးပိ​ရောင်​ ကတုံးဆံ​ထောက်​နဲ့ ခါးပိုက်​နှိုက်​ က အိတ်​နဲ့ကွယ်​ ​ပေးပါတယ်​ လက်​၀ဲဘက်​ တက်​တူး ရှပ်​အင်္ကျီအဖြူ နဲ့ ချာတိတ်​က နှိုက်​ပါတယ်​ သူတို့ နှိုက်​မယ့်​ သား​ကောင်​ကို ​တွေ့ရင်​ ​ခေါင်းကုတ်​ ပြီး​တော့ အချင်းချင်း အချက်​ပြပါတယ်​ နှိုက်​ပြီးသွားတာနဲ့ မျက်​နှာကို သပ်​ ပြီး အချက်​​ပေးပါတယ်​ ချက်​ချင်း လူခွဲ ပြီး အဆင်းပေါက်​ဘက်​ကို ​ရွှေ့ပါတယ် ခုလိုဖြစ်​စဉ်​​လေး​တွေ တင်​ပြ​ပေး​နေတာ ခရီးသွားပြည်သူ​တွေ အသိ သတိ ရှိ​စေချင်​လို့ ပါ ခုချိန်​ထိ ပြည်​သူ့ရဲ ​တွေရဲ့ ထိ​ရောက်​တဲ့ ၀န်​​ဆောင်​မှု အားရစရာမရှိပါ မြန်​မာပြည်​မှာ လူဖြစ်​လာကြတဲ့ ခရီးသည်​များ ကိုယ့်​အားကိုယ်​ကိုး ကိုယ့်​အန္တရာယ်​ကိုယ်​ကာကွယ်​ကြဘာလို့:-D Ko Aung Kawlin
27 Jun 2018 · 180K views
Vì anh yếu em ơi .... :v Link phim: https://youtu.be/oFROZiI-6hg = ==
4 Mar 2018 · 7.5M views
အင်္ဂလိပ်စာသားနဲ့ဘာသာပြန်ထည်.ပေးထားပါ သည်။ Friends တို.ရေ ၁ မိနစ်တောင်မရှိတဲ့ video file ထဲက စကားပြောလေးတွေလေ့ကျင်.ကြရအောင်လား အများကြီးရှိတယ်လို့ 58. What time does your train leave? 🎈Hey, Marie, Can you drive me to the train station? ​ဟေး Marie၊ ကျမ ကိုဘူတာရုံလိုက်​ပို့​ပေးနိုင်​မလား 🎈Sure! What time does your train leave? လိုက်​ပို့မယ်​​လေ၊ ရှင့်​ရထားကဘယ်​အချိန်​ထွက်​မှာလဲ 🎈I'm not sure. Let me check my ticket. ​ကျမ​သေချာမသိဘူး၊ ကျမလက်​မှတ်​ပြန်​စစ်​ပါရ​စေ 🎈So what time does your train leave? ဒါဆို ရှင့်​ရထားကဘယ်​အချိန်​ထွက်​မှာလဲ 🎈It leaves at 2:00. ၂နာရီထွက်​မှာ 🎈Are you sure? Check again. ရှင်​​သေချာလား၊ ပြန်​စစ်​ပါဦး 🎈What time does your train leave? ရှင့်​ရထားဘယ်​အချိန်​ထွက်​မှာလဲ 🎈My train leaves at 2:00. Is thereaproblem. ရထားက၂နာရီထွက်​မှာ၊ ပြသနာရှိလို့လား 🎈Yes! It's already 2:30! You missed your train. ရှိတာ​ပေါ့ ၊ ၂နာရီ​တောင်​ခွဲပြီးပြီ၊ ရှင်​ရထားမမှီ​တော့ဘူး With metta💓💓
Htar Htar Keinn
design အလန်းစား T-shirts လေးများ
7 Jan 2017 · 264K views